Koonfurta Sudan oo ay ka socdaan Dabaal degyada Maalinta madax banaanida Dalkaasi. – SBC
Koonfurta Sudan oo ay ka socdaan Dabaal degyada Maalinta madax banaanida Dalkaasi.
Wadanka Cusub ee kusoo kordhay caalamka waa dalka Koonfurta Sudan,waxaa maanta dalkaasi looga dabaal degayaa maalinta madax banaaniniada shacabka Koonfurta Sudan,iyadoona Maanta oo sabti ah ay dalkaasi ka dhacayso xaflada Munsaabada madax banaanida,iyadoona ay kasoo qayb galayaan madax fara badan oo kakala imaanaysa caalamka daafihiisa.
Madaxweynaha Sudan Cumar Xasan Al bashiir iyo Xooghayaha guud ee Qaramada Midoobeey Ban Kii Moon ayaa kamid ah madaxda lagu sharfay kasoo qayb galka xaflada loo dhigayo ku dhawaaqida madax banaanida Koonfurta Sudan.
Waqooyiga Sudan ayaa noqonaysa dowladii ugu horaysay ee si caalami ah ugu aqoon satay Gobol ka tirsanaa in uu noqdo dal madax banaan,iyadoona haatan madaxda Sudan ay isku raacsan yihiin madax banaanida Koonfurta Sudan.
Xoriyada ay ku naaloonayaan Maanta shacabka Koonfurta Sudan ayaa ah mid timi kadib wakhti dheer oo dhiig badan ku daatay sidii ay shacabkaasi u heli lahaayeen madax banaani iyo weliba dowlad u gaar ah.
Habeenimadii Xalay ilaa maanta waxaa si aad ah xarunta Koonfurta Sudan iyo weliba Magaalooyinka kale ee dalkaasi si aad ah uga socda dabaal degyada iyo weliba damaashaadyada lagu soo dhoweynayo maalinta madax banaanida Koonfurta Sudan.
Koonfurta Sudan waxaa ay noqotay dowladii 193-aad ee dowladaha caalamka ee ku jira Liiska qaramada Midoobeey,iyadoona sidoo kale noqotay Dowladii 54-aad ee kusoo biirta wadamada qaraadan Afrika.